जब एसपी मीरा चौधरी ‘स्तन ठूलो बनाउने’ औषधि किन्न आफैं पसल पुगिन्...!
ARCHIVE » जब एसपी मीरा चौधरी ‘स्तन ठूलो बनाउने’ औषधि किन्न आफैं पसल पुगिन्...!
काठमाडौं - मुखमा मास्क लगाएकी छन् । गुनासो छ, ‘स्तन एकदमै सानो भयो । श्रीमानले पनि वास्ता गरेनन् ।’ पसलेले भन्यो, ‘के चिन्ता गर्नुहुन्छ ? यो लिएर जानुस्, एक महिनामा काम भएन भने पैसा फिर्ता !’ उनले गुनासो गरिन्, ‘पहिला पनि यहीबाट यही औषधी लगेको ।
तर, काम भएन् ।’ पसले अड्किए, ‘नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ !’ त्यसपछि ‘स्तन सानो भएकी’ महिलाले इशारा गरिन् । झुरुप्प सादा पोशाकबाला मानिसहरु भेला भए । ‘उहाँलाई हाल्नुस्’ भन्दै आफू पनि गाडीको अघिल्लो सीटमा बसिन् ।
यी ‘स्तन सानो भएकी’ ग्राहक थिईन्, नेपाल प्रहरीमा कडा मिजासकी भनेर चिनिने एसपी मीरा चौधरी । खासमा उनलाई स्तन बढाउनु परेको थिएन्, तर उनको जस्तो स्तन भएका थुप्रै महिला स्तन ठूलो पार्ने चक्करमा दिनदिनै र दिनदहाडैं राजधानीभित्रै लुटिँदै थिए ।
‘लिंग उत्तेजित नभएर एकदमै हैरान भयो । यौनसम्पर्क गर्दा बल्ल-बल्ल लिंग सोझिन्छ, तर तुरुन्तै फेरि लत्रक्क परेर खत्तम ! मलाई दवाई दिनुर्‍यो साहुजी !’ यस्तो सुनेपछि ‘एक गिलास दूधमा हालेर दिनमा दुईपटक खाने’ भन्र्दै बसुन्धाराका पसलेले एउटा औषधि दिए ।
‘लिंग उत्तेजित भएन्’ भन्ने ग्राहकले औषधिमात्र हातमा लिएनन्, पसलेलाई ‘यता आउनुस् त’ भनेर बोलाए । किन रहेछ भन्दै ‘ग्राहक’ को छेउमा पुगेका मात्र के थिए, च्याप्प समातेर गाडीमा हाले । अनि परिचय दिए, ‘म डिएसपी कवित कटसवाल हुँ ।’
यसरी एक हप्ताअगाडि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) का प्रहरीहरु १० वटा टोली बनाएर आफैं-आफैं यौनको बिरामी बन्दै राजधानीका विभिन्न भागमा छरिए । कसैको यौन सम्पर्क शुरु नहुँदै वीर्य स्खलन हुने, कसैको यौन उत्तेजना साम्य नभएर समस्या परेको, कोहीकी श्रीमती उत्तेजित भईनन् भन्ने गुनासो ।
यस्तो गुनासो लिएर १० वटा ‘बिरामी टोली’ ले १३ ठाउँबाट १५ जनालाई पक्राउ गरी महाराजगञ्जस्थित प्रहरी बृतको हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भईरहको प्रहरीले जनाएको छ । जनअाश्था साप्ताहिकमा खबर छ ।